Ity ny efitrano fandroana, ny iray ao an-tranonao dia trano fidiovana --- fironana vaovao amin'ny famolavolana ny fandroana amin'ny 2021
Home / Blog / Ity ny efitrano fandroana, ny iray ao an-tranonao dia trano fidiovana fotsiny - fironana vaovao amin'ny famolavolana trano fidiovana amin'ny 2021
Ity ny efitrano fandroana, ny iray ao an-tranonao dia trano fidiovana fotsiny - fironana vaovao amin'ny famolavolana trano fidiovana amin'ny 2021
2021 / 04 / 05 FisokajianaBlog 1733 0
Lohatenin'ny fandroana Xiaoxin
Ny toerana fampiasa selfie voalohany eto an-tany dia ny trano fandroana, maninona ny olona no tia manao selfie ao amin'ny fandroana?
Indrindra amin'ny toeram-pivarotana sy ny trano fidiovana hotely.
Ny fitifirana tsy fitoviana eo amin'ny fitaratra dia sarobidy be.
Izany no mahatonga ny olona sasany manontany tena.
Fa maninona ao amin'ny efitranony manokana no tsy afaka mitifitra izany?
Tsy satria tsy tsara tarehy ny tranonao
Ny fironana vaovao amin'ny famolavolana fahasalamana amin'ny taona 2019.
Ireo fifantohana endrika am-pitandremana ireo, amin'ny fiheverana fa ny tranonao dia mety hanana trano fandroana tsara koa!
Mifoha maraina eo am-pandriana, ary te-ho any amin'ny trano fidiovana, mihazakazaka mankany amin'ny trano fidiovana fa mahita ny fianakaviana misasa ao anatiny, efa sendra izany toe-javatra izany ve ianao? Raha ny marina dia azontsika atao ny mametraka ny vilany eo ivelan'ny trano fidiovana ary mamela ny fidiovana sy fandroana ao anatiny. Tsy hanatsara ny fahombiazan'ny fampiasana sy hanatsara ny filan'ny fiainana izany, fa hanatsara ny fandroana koa.
Ny famindrana ny vilany any ivelany dia ny fampidirana rindrina sy varavarana eo anelanelan'ny trano fidiovana sy ny fitoerany hanasarahana ireo faritra lena sy maina, ary ny faritra fidiovana sy fandroana dia azo sarahina amin'ny lena sy maina indray.
Ny fandroahana misaraka any ivelany dia mety kokoa ho an'ny fianakaviana ny manasa amin'ny maraina sy ny hariva, amin'izay tsy mila maika hampiasa ny trano fidiovana isan'andro.
Ity famolavolana ity dia tsy vitan'ny hoe tsy mifanelingelina amin'ny fampiasana sy ny trano fidiovana ary ny fandroana, fa manome antoka ihany koa fa ny borosy nify, lamba famaohana ary kojakoja manokana tsy miankina amin'ny bakteria ao amin'ny trano fidiovana.
Famolavolana rindrina vita amin'ny rindrina
Amin'ny fiainana andavanandro, ny kabine amin'ny gorodona, ny arimoara amin'ny gorodona dia matetika no mahazatra. Saingy rehefa mihatsara ny fari-piainan'ny olona, ​​ho an'ny famolavolana ny trano fidiovana, dia mihalalina bebe kokoa ny antsipiriany, fa koa mitodika hatrany amin'ny kalitao. Ny kabine fidiovana amin'ny rindrina, labozia vita amin'ny rindrina, kabinetra fandroana vita amin'ny rindrina ihany koa dia misarika ny saina hatrany. Tsy noho ny endriny tokana ihany, fa satria io endriny io dia mety kokoa amin'ny filan'ny fiainam-bahoaka.
Toilet faritra + fanasana faritra fitahirizana faritra
Betsaka ny olona no mimenomenona, kely dia kely ny trano fidiovana, miampy kitapo fitehirizana, mampamoy fo tokoa izany!
Raha ny marina, raha mbola isika ampiasao araka ny antonony ny rindrina ao ambadiky ny kabine sy ny faritra fanasana azontsika itahirizana zavatra maro, na dia 0.5㎡ fotsiny aza dia azo alamina mora foana.
Ny fitoeran-drano miafina misy fidiovana mitaingina rindrina dia eo ambonin'ilay kabinetran'ny trano fidiovana, ary matanjaka ny fahatsapana ankapobeny.
Ny famolavolana ny trano fidiovana mitaingina rindrina dia tena mety ary afaka manampy fiainana eo amin'ny trano fidiovana kely.
Ny famolavolana “Torohevitra"
| Jiro |
Raha ny iray fandroana iray ihany no manana jiro lehibe dia hiteraka famirapiratan-javatra tsy mitovy, faritra maizina eo an-toerana, ny trano fidiovana kely tany am-boalohany dia ho kely kokoa aza. Ka mila miasa amin'ireo lafin-javatra telo ireo ianao.
Faritra fitaratra: asio hazavana eo aloha ny fitaratra mba hahatonga ny loharano fahazavana hitsatoka ny tavanao.
Eo ambanin'ilay kabinetra fitaratra napetraka ny toiletries: Raha mahatsapa maizina ianao dia afaka mamolavola hazavana fanampiny.
Ambony ny kabine: Raha manana fahazarana mamaky ianao rehefa mampiasa trano fidiovana dia asaina mamorona jiro famakiana kely fanampiny eo ambonin'ny fidiovana.
fampahatsiahivana: ny trano fidiovana amin'ny fametrahana jiro sy jiro dia tsy maintsy misafidy hamandoana, fandrao hiseho ao anaty ny jiro sy ny fanilo ny zavona, hanafohezana ny ain'ny serivisy.
| Fandroana miafina |
Ny fandroana mahazatra antsika indrindra dia ity
Fotoana hamelombelona ny hatsarana, fandroana miafina dia ny fanatsarana ny sandan'ny fitaovam-piadiana.
Ny fantsom-pamatsian-drano amin'ity fandroana miafina ity dia alevina mialoha ao anatin'ny rindrin'ny trano fidiovana, ny lohan'ny fandroana dia miorina amin'ny toeran'ny overhead, ny bracket ao amin'ny rindrina, tsy azo nakarina araka ny sitrapony, ny lohan'ny fandroana sy ny switch ihany no miseho ivelany. Fa ny lohan'ny fandroana dia manana baolina mavitrika kely, ampiasaina hanitsiana ny zoro amin'ny rano. Ny zoron'ny hetsika miakatra sy midina dia miovaova kokoa.
Tsy misy fantsona miharihary, hita maso tsotra sy tsara tarehy kokoa, ary tsy maka habaka. Ny filazantsaran'ny trano fidiovana kely.
Previous :: Loko avo lenta toy izany, Toerana fandroana toy ny hip tokoa! Next: Washbasin ivelany dia azo ampiharina tokoa! Fa raha tsy mitandrina ireo teboka 5 ireo ianao, korontana tsy tapaka avy eo!
Ampy ny efitra fandroana iray, maninona no mila trano fandroana roa any Sina ianao?
2021 / 04 / 12 328
Ny efitrano fandroana ao an-trano, misafidy ny trano fidiovana amin'ny rindrina? Na gorodona gorodona Toi ...
2021 / 04 / 12 321
Mihetsiketsika indray ny onja mangatsiaka! Vokatra amin'ny fandroana, Ahoana no hisorohana ny hatsiaka?
2021 / 04 / 11 767
Mametraka talantalana eo amin'ny trano fidiovana, miaina 5 metatra toradroa avy hatrany ny fandroana!
Ahoana ny fametrahana ny faritra fanasan-damba amin'ny fomba mahomby kokoa? Manomboha amin'ity lafiny efatra ity ...
Fanamboarana ny fandroana, kapoka 5 hahatratrarana fiovana mahafinaritra
2021 / 04 / 10 447